” ဂိုဏ်းတော် ချုပ် ဘိုးတော် ဦးပွင့် နှင့် လူ့ အရေပြားပေါ် မှာ ရေးထား တဲ့ သရဲနိုင်အင်း “ – Na Pann San
” ဂိုဏ်းတော် ချုပ် ဘိုးတော် ဦးပွင့် နှင့် လူ့ အရေပြားပေါ် မှာ ရေးထား တဲ့ သရဲနိုင်အင်း “
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ အပိုင်ကြက်ကျွန်း ၌ ရွာသူုကြီး လည်းဖြစ် အထက်ဂိုဏ်း ဆရာကြီးလည်းဖြစ် တဲ့ ဆရာကြီး ဦးထွန်း သည် အဘ ဘိုးတော်ပွ င့်၏ တပည့်ရင်းဖြစ်ပြီး အလွန်ပင် လူသိများကာ ထင်ရှားကျော်ကြား ၍နေလေ သည်….။ ထိုရွာကြီးနှင့် မနီးမဝေး ရွာကြီးတစ်ရွာ မှ အောက်လမ်းဆရာကြီး တစ်ဦးသည် လည်း ဆရာကြီး ဦးထွန်းအား ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း အမြဲအလစ်ချောင်းကာကြံစည်လျက် ရှိချေ၏…။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကြီးဦးထွန်း ၏ ဇနီးသည် ဆုံးပြီး တစ်လခန့်အကြာ ၌ အသက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ကျော် သုံးဆယ်ခန့် အသားဖြူဖြူ လုံးကြီးပေါက် လှ ရုပ်ရည်က သနားကမား နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆရာကြီးတို့အိမ်သို့ရောက်ရှိ လာပြီး ဆေးကုသလိုလို နဲ့ သူကိုယ်သူ အပျိုကြီး ပါဆိုပြီး ပတ်ချွဲနှတ်ချွဲ နဲ့ မုဆိုးဖိုဆရာကြီး ဦးထွန်းအား ဖျားယောင်းမြူ ဆွယ်လေတော့သည်….။
နောက် မကြာမှီ ကြောင်ကတွင်းပျက် ဆရာကြီးဦးထွန်း နဲ့ ဇရက်တောင်ပံကျိုး အပျိုကြီး အကြောင်း တစ်ရွာလုံးက သိကုန်ကြလေ သည်….။ သားသမီးများကလည်း မထူးတော့ဘူး ဆေးပေးမီးယူရ ပါစေတော့ဆိုပြီး သူတို့နှစ်ဦး ကို ပေးစားလိုက်ကြရာ ဆရာကြီးဦးထွန်းတို့ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲ ကျပြန်လေပြီ….။
မင်္ဂလာ ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် ခုနှစ်ရက်မြောက်မှာ ဘဲ ပြသာနာက စတင်၍လာချေ ပြီ…….။ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် မှ အသံသြသြကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့ အသံကို တစ်မိသားစုလုံးကြားလိုက်ရပေသည်….။ “ဆရာကြီး…ကျွန်တော်ဒီအိ မ်မှာနေပါ ရစေ….” “မင်းကဘယ်သူလဲကွ….သွားသွား…. ငါအိမ်မှာ လာမနေနဲ့ ငါလက်မခံဘူးကွ….” အဲဒီလိုလည်းပြောလိုက်ရော အသံရှင်ကေ ပျာက်သွားပြန်လေ သည်….။
နောက်နှစ်ရက် သုံးရက်ခန့်နေတော့ ဦးထွန်း၏ အသစ်စက်စက်ဇနီးလေးက “အကိုကြီးရေ…ဒီတခါနေပါရစေ ဆိုရင် ခွင့်ပြုလိုက်ပါနော်၊ မစဖို့ရောက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ……” တပတ်လောက် လည်းရှိရော “ဆရာကြီး… .ကျွန်တော် ဒီအိမ်မှာနေ ပါရစေ….” “မင်းက ငါ့အိမ်မှာ ဘာလုပ်ဖို့နေချင်ရတာလဲ….” “ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး… အိမ်သူ အိမ်သားများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပြီးနေ ချင်လို့ပါ….”
‘အကိုကြီးရယ်… ကောင်းကောင်းနေမယ် ဆို ခွင့်ပြုလိုက်ပါ….” မယားစကားကအောင်ချေ ပြီ….။ ဦးထွန်းတို့ အိမ်မှာနေ ခွင့်ပြုလိုက်လေုပြီ….။ “အေးအေး…ဒီအိမ်က လူတွေကို မနှောက်ယှက်ဘဲ အကူအညီပေးမယ် ဆိုရင် နေပေါ့ကွာ……” “ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး… ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း နေပါ မယ်….” အသံရှင်က ကောင်းစွာနေမည့်အကြောင်း ကတိပြုလေ သည်….။
ထိုသိုနေခွင့်ပြုသည့်နေမှစ ၍ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်၌ ဝုန်းဒိုင်းကြဲ ၍ သောင်းကျန်းကာနေတော့သည် ။ လူများ ထိုင်သည့် အနီးမှလည်း မထိအောင်ကပ် ၍ ပြေးလွားခြင်း ချောက်လှန့်ခြင်းများပြုလေတော့သ ည်….။ ဆရာကြီး ဦးထွန်းလည်း ဒေါသထွက်ပြီး “ဟေ့အကောင်…. နင် ဒီအိမ်မှာကောင်းကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ ငါခွင့်ပြုထားတာ….အခုနင်ကတိ မတည်ဘူး… အခုချက်ချင်း ငါအိမ်ကထွက်သွားစမ်း….” “ဟားဟားဟားဟား….မထွက်တော့ ဘာလုပ်ချင်လဲ…. လုံးဝမထွက်နိုင်ဘူးဗျ….”
အထက်လမ်းဆရာကြီးတော့ သရဲမောင်းထုတ်တာမရလို့ဒုက္ခတော့တွေချေပြီ ….။ ‘အရင် ငါပယောဂကိုနိုင် လို့ ကုနေတာ အခု ဒီသရဲကြ မှ ဘာဖြစ်လို့မနိုင်တာလဲ တခုခုတော့ တခုခုပဲ….ငါနဲ့ ပညာညီကို ဦးငွေရစီသွားပြီးတိုင်ပင်ဦး မှ…’ ဆိုပြီးအိမ် မှ ထွက်သွားလေတော့ သည်….။
ဦးငွေရသည် ဦးထွန်းနှင့် ပညာညီကိုဖြစ်ပြီး ဘိုးတော်ပွင့်၏ တပည့်ကြီးများဖြစ်ကြလေသည် ….။ ဆရာကြီးဦးငွေရ အိမ်ကို လည်းရောက်ရော သဲမန်း ဆန်မန်းများဖြင့် အိမ်ခြံအား ရှင်းလင်းပက်ဖြန်း ၍ ဆောင်ရွက်လေ တော့သည် ….။ အိမ်၏အတက်အဆင်း လှေကားရင်း၌ အင်းချပ်တစ်ခုအားတွေ့ရလေသည်…..။ ထိုအင်းမှာ လူ၏အရေပြား ၌ အင်းကွက်များချထားခြင်းဖြစ် သည်…..။ ထိုအင်းအား မီးနှင့်ရှို့ကြည်ရာ မီးမလောင် သဖြင့် ရေထဲမျောချ လိုက်သော အခါ ရေကူးသွားကြောင်းတွေ့ရလေသည်…..။
ဤကဲ့သို့ဖြစ်နေ သဖြင့် ဆရာကြီးဦးထွန်းတို့ပညာ ညီကိုနှစ်ဦး တိုင်ပင်ပြီး ဣစ္ဆာသယ မဟိဒ္ဓိစေဂိုဏ်းတော်ချုပ် ဘိုးတော် ပွင့်ကြီးအား မရမကပင့်ကြလေေ တာသည်…..။ ဘိုးတော်ပွင့်ကြီး အိမ်သို့ကြွရောက်လာပြီး မိသားစုဝင်များ အားလုံး အား စီတန်းထိုင်စေပြီး ‘ အတွင်းရန် အပြင်ရန် အတွင်းစက် အပြင်စက်များအား ချုပ်ပြီးတုတ်ပြီးဖြစ်စေ ထသွား၍တောင် မရစေနဲ့’ ဟု အမိန့်ပြန်လေတော့သည်…..။
ပြီးနောက် “မင်းတို့တွေ…တစ်ယောက်ချင်း စီထပြီး ဒီနေရာကနေဟိုနေရာ ကို သွားလို့ ရရင် သွားထိုင်ချေ “ဟု ခိုင်းလေတော့ သည်….။ ဦးထွန်း၏ ဇနီးအသစ်မှာ ကြမ်းပြင်၌ သံမှိုစွဲနေသည့်ပမာကပ်နေပြီး ထလို့ မရတော့ပေ…..။
ထိုအချိ န်၌ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် မှ သရဲကြီးက “ဆရာကြီး ခင်ဗျ….အဲဒီမိန်းမက အဓိက တရားခံပါ….သူ့ကိုစစ်ဆေးရင် အားလုံး ပေါ်မှာပါ…ကျွန်တော် ကိုလည်း သူတို့ခိုင်းစားနေကြတာပါ…ကျွန်တော် ဒီဘဝက ကျွတ်လွတ်ချ င်ပါပြီ…. ဆရာကြီး ကယ်တော် မူပါခင်ဗျား….” “ကိုင်း….ကြားတဲ့ အတိုင်းဘဲ မင်း အမှန်အတိုင်း ပြောပေတော့……” “ဟုတ်ကဲ့ပါ… .အမှန် အတိုင်း ပြောပါမယ်….”
“ဒီလိုပါ ဆရာကြီး….ကျွန်မက အောက်လမ်းဆရာကြီးရဲ့ မိန်းမပါ…. ကျွန်မယောက်ျား က ဦးထွန်း ကို ပညာပြိုင်တာ ဘယ်လို မှ မရဘူးဖြစ်နေတော့ ဦးထွန်း သီလပျက်အောင် ကျွန်မကို အပျိုယောင်ဆောင် ခိုင်းပြီး ဦးထွန်းနဲ့ညားအောင် လုပ်ခိုင်းတာ ပါ…. ပြီးတော့ အိမ်အတက် အဆင်းလှေကရင်းမှာ အင်းမြုတ်ခိုင်းလိုမြုတ်ပေးထား ရပါတယ် အခုတော့ဆရာတွေ ရှင်းလိုက် ပါပြီ….
ဒီအိမ် မှာ သရဲကြီးနေနိုင်အောင် လည်း ပရိယယ်သုံးပြီး ဦးထွန်း လက်ခံ လာအောင် ပြောပေးရ ပါတယ်…. အခု ဒီကိစ္စတွေအားလုံးပေါ် ကုန်ပြီမို့ ကျွန်မကိုခွင့်လွတ်ပါ ဆရာကြီး ဒီအိမ်ကနေ ကျွန်မအပြီးထွက်သွား ပါမယ်… ဒါတွေအားလုံး ကို ကျွန်မယောက်ျား အောက်လမ်းဆရာက စီစဉ်တဲ့အတိုင်း သူကိုကြောက် လို့လုပ်ရတာပါ ….နောင်ကို သူနဲ့ လည်း မပေါင်းတော့ပါဘူး… ဒီအိမ်ကလူတွေကိုလည်း ဒုက္ခမပေးတော့ ပါဘူးဆိုတာ ကတိပေးပါတယ် ဆရာကြီး…….”
“ကိုင်းကိုင်း….မောင်ထွန်းရေ ရန်သူက အရှုံးပေးနေမှတော့ ခွင့်လွတ်လိုက် ပါကွာ….. နောင်ကို အပျိုဆိုတိုင်း မယူနဲ့ကွ… သေချာလေ့လာ ပါ…အိမ်မှာနေ ပါရစေ…. အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါရစေ ဆိုတိုင်း ဘာကောင်မှန်းမသိ လက်မခံနဲ့ကွ…. အဲဒါ သင်ခန်းစာပဲကွ….သူတို့ရဲ့လှည့်ကွက်ထဲ မဝင်အောင် သီလ သမာဓိ ပညာနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီး လုပ်ရမယ်ဟေ့…. ကိုင်းကိုင်း …ပြသာနာတွေလည်း ရှင်းပြီမို့ ငါပြန်တော့မယ်ဟေ့…အားလုံးသော အိမ်သူအိမ်သား တပည့်သားမြေးတွေ ကျမ်းမာချမ်းသာကြ ပါစေကွာ….”
မျောလမွိုငျကြှနျးမွို့ အပိုငျကွကျကြှနျး ၌ ရှာသူုကွီး လညျးဖွဈ အထကျဂိုဏျး ဆရာကွီးလညျးဖွဈ တဲ့ ဆရာကွီး ဦးထှနျး သညျ အဘ ဘိုးတျောပှ ငျ့၏ တပညျ့ရငျးဖွဈပွီး အလှနျပငျ လူသိမြားကာ ထငျရှားကြျောကွား ၍နလေေ သညျ….။ ထိုရှာကွီးနှငျ့ မနီးမဝေး ရှာကွီးတဈရှာ မှ အောကျလမျးဆရာကွီး တဈဦးသညျ လညျး ဆရာကွီး ဦးထှနျးအား ပကျြစီးရာ ပကျြစီးကွောငျး အမွဲအလဈခြောငျးကာကွံစညျလကျြ ရှိခြေ၏…။
” ဂိုဏျးတျော ခြုပျ ဘိုးတျော ဦးပှငျ့ နှငျ့ လူ့ အရပွေားပျေါ မှာ ရေးထား တဲ့ သရဲနိုငျအငျး “
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကွီးဦးထှနျး ၏ ဇနီးသညျ ဆုံးပွီး တဈလခနျ့အကွာ ၌ အသကျနှဈဆယျငါးနှဈကြျော သုံးဆယျခနျ့ အသားဖွူဖွူ လုံးကွီးပေါကျ လှ ရုပျရညျက သနားကမား နဲ့အမြိုးသမီးတဈဦး ဆရာကွီးတို့အိမျသို့ရောကျရှိ လာပွီး ဆေးကုသလိုလို နဲ့ သူကိုယျသူ အပြိုကွီး ပါဆိုပွီး ပတျခြှဲနှတျခြှဲ နဲ့ မုဆိုးဖိုဆရာကွီး ဦးထှနျးအား ဖြားယောငျးမွူ ဆှယျလတေော့သညျ….။
နောကျ မကွာမှီ ကွောငျကတှငျးပကျြ ဆရာကွီးဦးထှနျး နဲ့ ဇရကျတောငျပံကြိုး အပြိုကွီး အကွောငျး တဈရှာလုံးက သိကုနျကွလေ သညျ….။ သားသမီးမြားကလညျး မထူးတော့ဘူး ဆေးပေးမီးယူရ ပါစတေော့ဆိုပွီး သူတို့နှဈဦး ကို ပေးစားလိုကျကွရာ ဆရာကွီးဦးထှနျးတို့ ရငေတျတုနျးရတှေငျးထဲ ကပြွနျလပွေီ….။
မင်ျဂလာ ဆောငျပွီးတဲ့နောကျ ခုနှဈရကျမွောကျမှာ ဘဲ ပွသာနာက စတငျ၍လာခြေ ပွီ…….။ အိမျခေါငျမိုးပျေါ မှ အသံသွသွကွီးနဲ့အျောလိုကျတဲ့ အသံကို တဈမိသားစုလုံးကွားလိုကျရပသေညျ….။ “ဆရာကွီး…ကြှနျတျောဒီအိ မျမှာနပေါ ရစေ….” “မငျးကဘယျသူလဲကှ….သှားသှား…. ငါအိမျမှာ လာမနနေဲ့ ငါလကျမခံဘူးကှ….” အဲဒီလိုလညျးပွောလိုကျရော အသံရှငျကေ ပြာကျသှားပွနျလေ သညျ….။
နောကျနှဈရကျ သုံးရကျခနျ့နတေော့ ဦးထှနျး၏ အသဈစကျစကျဇနီးလေးက “အကိုကွီးရေ…ဒီတခါနပေါရစေ ဆိုရငျ ခှငျ့ပွုလိုကျပါနျော၊ မစဖို့ရောကျလာတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ ဖွဈခငျြဖွဈနမှော……” တပတျလောကျ လညျးရှိရော “ဆရာကွီး… .ကြှနျတျော ဒီအိမျမှာနေ ပါရစေ….” “မငျးက ငါ့အိမျမှာ ဘာလုပျဖို့နခေငျြရတာလဲ….” “ဘာမှ မလုပျပါဘူး… အိမျသူ အိမျသားမြားကို ကူညီစောငျ့ရှောကျပွီးနေ ခငျြလို့ပါ….”
‘အကိုကွီးရယျ… ကောငျးကောငျးနမေယျ ဆို ခှငျ့ပွုလိုကျပါ….” မယားစကားကအောငျခြေ ပွီ….။ ဦးထှနျးတို့အိမျမှာနေ ခှငျ့ပွုလိုကျလေုပွီ….။ “အေးအေး…ဒီအိမျက လူတှကေို မနှောကျယှကျဘဲ အကူအညီပေးမယျ ဆိုရငျ နပေေါ့ကှာ……” “ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး… ကြှနျတျော ကောငျးကောငျး နပေါ မယျ….” အသံရှငျက ကောငျးစှာနမေညျ့အကွောငျး ကတိပွုလေ သညျ….။
ထိုသိုနခှေငျ့ပွုသညျ့နမှေစ ၍ အိမျခေါငျမိုးပျေါ၌ ဝုနျးဒိုငျးကွဲ ၍ သောငျးကနျြးကာနတေော့သညျ ။ လူမြား ထိုငျသညျ့ အနီးမှလညျး မထိအောငျကပျ ၍ ပွေးလှားခွငျး ခြောကျလှနျ့ခွငျးမြားပွုလတေော့သ ညျ….။ ဆရာကွီး ဦးထှနျးလညျး ဒေါသထှကျပွီး “ဟအေ့ကောငျ…. နငျ ဒီအိမျမှာကောငျးကောငျးနမေယျဆိုလို့ ငါခှငျ့ပွုထားတာ….အခုနငျကတိ မတညျဘူး… အခုခကျြခငျြး ငါအိမျကထှကျသှားစမျး….” “ဟားဟားဟားဟား….မထှကျတော့ ဘာလုပျခငျြလဲ…. လုံးဝမထှကျနိုငျဘူးဗြ….”
အထကျလမျးဆရာကွီးတော့ သရဲမောငျးထုတျတာမရလို့ဒုက်ခတော့တှခေပြွေီ ….။ ‘အရငျ ငါပယောဂကိုနိုငျ လို့ ကုနတော အခု ဒီသရဲကွ မှ ဘာဖွဈလို့မနိုငျတာလဲ တခုခုတော့ တခုခုပဲ….ငါနဲ့ ပညာညီကို ဦးငှရေစီသှားပွီးတိုငျပငျဦး မှ…’ ဆိုပွီးအိမျ မှ ထှကျသှားလတေော့ သညျ….။
ဦးငှရေသညျ ဦးထှနျးနှငျ့ ပညာညီကိုဖွဈပွီး ဘိုးတျောပှငျ့၏ တပညျ့ကွီးမြားဖွဈကွလသေညျ ….။ ဆရာကွီးဦးငှရေ အိမျကို လညျးရောကျရော သဲမနျး ဆနျမနျးမြားဖွငျ့ အိမျခွံအား ရှငျးလငျးပကျဖွနျး ၍ ဆောငျရှကျလေ တော့သညျ ….။ အိမျ၏အတကျအဆငျး လှကေားရငျး၌ အငျးခပျြတဈခုအားတှရေ့လသေညျ…..။ ထိုအငျးမှာ လူ၏အရပွေား ၌ အငျးကှကျမြားခထြားခွငျးဖွဈ သညျ…..။ ထိုအငျးအား မီးနှငျ့ရှို့ကွညျရာ မီးမလောငျ သဖွငျ့ ရထေဲမြောခြ လိုကျသော အခါ ရကေူးသှားကွောငျးတှရေ့လသေညျ…..။
ဤကဲ့သို့ဖွဈနေ သဖွငျ့ ဆရာကွီးဦးထှနျးတို့ပညာ ညီကိုနှဈဦး တိုငျပငျပွီး ဣစ်ဆာသယ မဟိဒ်ဓိစဂေိုဏျးတျောခြုပျ ဘိုးတျော ပှငျ့ကွီးအား မရမကပငျ့ကွလေေ တာသညျ…..။ ဘိုးတျောပှငျ့ကွီး အိမျသို့ကွှရောကျလာပွီး မိသားစုဝငျမြား အားလုံး အား စီတနျးထိုငျစပွေီး ‘ အတှငျးရနျ အပွငျရနျ အတှငျးစကျ အပွငျစကျမြားအား ခြုပျပွီးတုတျပွီးဖွဈစေ ထသှား၍တောငျ မရစနေဲ့’ ဟု အမိနျ့ပွနျလတေော့သညျ…..။
ပွီးနောကျ “မငျးတို့တှေ…တဈယောကျခငျြး စီထပွီး ဒီနရောကနဟေိုနရော ကို သှားလို့ ရရငျ သှားထိုငျခြေ “ဟု ခိုငျးလတေော့ သညျ….။ ဦးထှနျး၏ ဇနီးအသဈမှာ ကွမျးပွငျ၌ သံမှိုစှဲနသေညျ့ပမာကပျနပွေီး ထလို့ မရတော့ပေ…..။
ထိုအခြိ နျ၌ အိမျခေါငျမိုးပျေါ မှ သရဲကွီးက “ဆရာကွီး ခငျဗြ….အဲဒီမိနျးမက အဓိက တရားခံပါ….သူ့ကိုစဈဆေးရငျ အားလုံး ပျေါမှာပါ…ကြှနျတျော ကိုလညျး သူတို့ခိုငျးစားနကွေတာပါ…ကြှနျတျော ဒီဘဝက ကြှတျလှတျခြ ငျပါပွီ…. ဆရာကွီး ကယျတျော မူပါခငျဗြား….” “ကိုငျး….ကွားတဲ့ အတိုငျးဘဲ မငျး အမှနျအတိုငျး ပွောပတေော့……” “ဟုတျကဲ့ပါ… .အမှနျ အတိုငျး ပွောပါမယျ….”
“ဒီလိုပါ ဆရာကွီး….ကြှနျမက အောကျလမျးဆရာကွီးရဲ့ မိနျးမပါ…. ကြှနျမယောကျြား က ဦးထှနျး ကို ပညာပွိုငျတာ ဘယျလို မှ မရဘူးဖွဈနတေော့ ဦးထှနျး သီလပကျြအောငျ ကြှနျမကို အပြိုယောငျဆောငျ ခိုငျးပွီး ဦးထှနျးနဲ့ညားအောငျ လုပျခိုငျးတာ ပါ…. ပွီးတော့ အိမျအတကျ အဆငျးလှကေရငျးမှာ အငျးမွုတျခိုငျးလိုမွုတျပေးထား ရပါတယျ အခုတော့ဆရာတှေ ရှငျးလိုကျ ပါပွီ….
ဒီအိမျ မှာ သရဲကွီးနနေိုငျအောငျ လညျး ပရိယယျသုံးပွီး ဦးထှနျး လကျခံ လာအောငျ ပွောပေးရ ပါတယျ…. အခု ဒီကိစ်စတှအေားလုံးပျေါ ကုနျပွီမို့ ကြှနျမကိုခှငျ့လှတျပါ ဆရာကွီး ဒီအိမျကနေ ကြှနျမအပွီးထှကျသှား ပါမယျ… ဒါတှေအားလုံး ကို ကြှနျမယောကျြား အောကျလမျးဆရာက စီစဉျတဲ့အတိုငျး သူကိုကွောကျ လို့လုပျရတာပါ ….နောငျကို သူနဲ့ လညျး မပေါငျးတော့ပါဘူး… ဒီအိမျကလူတှကေိုလညျး ဒုက်ခမပေးတော့ ပါဘူးဆိုတာ ကတိပေးပါတယျ ဆရာကွီး…….”
“ကိုငျးကိုငျး….မောငျထှနျးရေ ရနျသူက အရှုံးပေးနမှေတော့ ခှငျ့လှတျလိုကျ ပါကှာ….. နောငျကို အပြိုဆိုတိုငျး မယူနဲ့ကှ… သခြောလလေ့ာ ပါ…အိမျမှာနေ ပါရစေ…. အိမျကိုစောငျ့ရှောကျပါရစေ ဆိုတိုငျး ဘာကောငျမှနျးမသိ လကျမခံနဲ့ကှ…. အဲဒါ သငျခနျးစာပဲကှ….သူတို့ရဲ့လှညျ့ကှကျထဲ မဝငျအောငျ သီလ သမာဓိ ပညာနဲ့ ဝဖေနျပိုငျးခွားပွီး လုပျရမယျဟေ့…. ကိုငျးကိုငျး …ပွသာနာတှလေညျး ရှငျးပွီမို့ ငါပွနျတော့မယျဟေ့…အားလုံးသော အိမျသူအိမျသား တပညျ့သားမွေးတှေ ကမျြးမာခမျြးသာကွ ပါစကှော….”
ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ်/တစ်ပြားမှ မရှိပဲ စတင်နိုင်မယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( ၆ ) ခု